Akụkọ - Teknụzụ ọhụụ nke DTS uzuoku ikuku ikuku
DTS ọhụrụ mepụtara uzuoku na-ekesa ihe nzacha ọgwụ, teknụzụ kachasị ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ, enwere ike itinye akụrụngwa ahụ n'ụdị nkwakọ ngwaahịa dị iche iche, na-egbu enweghị ntụ oyi, ọsọ ọsọ ọkụ na uru ndị ọzọ.
Kate ụdị ụdị ịgba ọgwụ adịghị mkpa ka uzuoku na-ebupụ ya. Ntugharị nke onye ofufe ahụ nwere ike imebi ikuku nke ikuku, na-eme ka uzuoku na-asọba n'ọdụ ụgbọelu, ma na-eme ka o kwekọọ na oghere nke ihe oriri, nke mere na uzuoku dị na ketulu na-agagharị, na ọkụ ọkụ nke nri bụ ihe ngwa ngwa, na sterilization mmetụta bụ ọzọ edo. N'oge usoro nwoke ịga ụlọ ọgwụ, ọ dịghị ihe ọ bụla achọrọ, nke na-echekwa oge izizi nke ikpo ọkụ ma na-ebelata oge ọgbụgba nwa.
Usoro nhichapu na ikpo ọkụ na-ejighi mmiri, ọ dịghịkwa mkpa uzuoku ọkụ iji kpoo mmiri mmiri, nke nwere ike ịchekwa ọtụtụ oriri ike uzuoku na ike oriri mmiri.
Igwe ikuku na-agba ume na-eme ka ụgbọ mmiri ahụ nwee ike ịbanye na ngwaahịa niile site n'otu nsọtụ ruo na nsọtụ nke ọzọ, na-ekpuchi ngwaahịa niile, ma na -echekwa uzuoku na-agagharị na mmiri iji mee nsị na-enweghị ntụ oyi.
Usoro ofufe nke ụdị ịgba ọgwụ nwere ikike na - enweghị ikike nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ, enwere ike ịlaghachi azụ - ma nwee ọtụtụ ngwa. Enwere ike itinye ya n'ọrụ na ngwaahịa ịgba ọgwụ ọkụ niile dị ka nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe, karama, kom kom, nri nri, na ngwaahịa anụ.